» सुन्दै आश्चर्य लाग्ने,बच्चा जन्माउने संसारकै पहिलो पुरुष ,तीन पटक भए सुत्केरी,आखिर को हुन त उनी? पुरा पढ्नुहोस, सुन्दै आश्चर्य लाग्ने,बच्चा जन्माउने संसारकै पहिलो पुरुष ,तीन पटक भए सुत्केरी,आखिर को हुन त उनी? पुरा पढ्नुहोस, – हाम्रो खबर
सुन्दै आश्चर्य लाग्ने,बच्चा जन्माउने संसारकै पहिलो पुरुष ,तीन पटक भए सुत्केरी,आखिर को हुन त उनी? पुरा पढ्नुहोस,
यौन अंग परिर्वतन गरेपछि पुरुष बनेपछि पनि बच्चा जन्माउन इच्छा गरेमा कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । लिंग परिवर्तनपछि पनि बच्चाको चाहनाले धेरैले बच्चा जन्माउने लहर नै चल्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । online48post बाट